Nnukwu batrị eletrik China Ose na ose igwe ESP-1 ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ya Trimill
Na -atụ aro eletrik nnu na ose igwe nri setịpụ nwere ike gwerie ihe dị iche iche, dị ka nnu mmiri, ose ojii, ose, kumin, wdg, enwere ike gwerie ụfọdụ irighiri ihe na -esighị ike, a ga -agbanwekwa ọkpụrụkpụ ya.
Ọrụ ahụ dị mfe ma dịkwa mma. Ndị nnu igwe nri enwere ike iji ya gwerie nri maka ụmụaka. Yiri mkpụrụ osisi sesame, enwere igwe nri abụọ n'ime ụlọ iri nri na ime nri: otu maka nnu na otu maka ose, nke enwere ike iji maka nri ndị China na Western;
The karama ahu nke eletrik nnu ose grinder ejiri igwe anaghị agba nchara 304 mee ya, nke adịghị mma, anaghị egbu egbu na enweghị mmerụ ahụ, siri ike ma na-eguzogide, ma dịkwa mfe nhicha. Ndị eletrik ose grinder na -emekwa ka nkọwa ahụ bụrụ ihe siri ike ma dị irè; Mmegharị seramiiki na-eguzogide nwere ike siri ike nke ukwuu, na-enye ohere ka etinyere ngwa nri Ọ na-enwe ahụ iru ala karịa, anaghị egbu egbu, anaghị emerụ emerụ, mgbochi ọxịdashọn, ọ dịghịkwa mfe nchara. Njirimara pụrụ iche na-abụghị ọla nke ceramik agaghị emepụta pores ma guzogide uto nke nje. Ọtụtụ ose grinder nwere ike na -egwe naanị otu ọkpụrụkpụ, nke dị mfe igwu ihe na -ekwekọghị ekwekọ. Igwe nri a nwere ọmarịcha atụmatụ dị mma. Naanị ihe ị ga -eme bụ ijikwa eriri nke valvụ na -achịkwa ka ị mata oke ọkpụrụkpụ nke igwe nri, nke nwere ike gboo mkpa nri gị, ike ya dịkwa. Na -ekwu nke ọma na oghere kaadị ma na -egweri. Ọ na-agwụ ike ma na-ewetara gị ahụmịhe dị mma. Nhazi batrị 4 na-eweta ike siri ike, bọtịnụ dị mfe ma na-adịgide, karịa elu, na aka na-adị oke mma.
I kwesiri inwe ose grinder nke nwere ọtụtụ ọrụ n'otu, yana ọnụ ahịa dị oke ọnụ ose grinder.
Nke gara aga: Onye na -emepụta ose na -egwe kọfị kọfị na -egwe ihe seramiiki na -egweri isi
Osote: Manual Spice Salt Pepper Mill nwere oge dị iche iche
Nnu nnu na ose
Ose na Nnu Nnu
Nnu na ose Mills